Nsuku zonke ingane ifunda amakhono amasha, ifunda into ebalulekile futhi edingekayo. Ngolunye usuku sekuyisikhathi sokufundisa ingane embizeni. Kunini lapho kudingekile ukwenza lokhu, nokuthi ungamfundisa kanjani ingane ukucela imbiza?
Njengoba kufika ama-diapers alahlekile, inkinga yokujwayela ebhodweni imisiwe ukuba ibe nzima kakhulu. Umama wayedinga izikhathi eziningana ukugqoka izingane ezembethe izingubo ezomile, okwakufanele zihlanjwe ngesandla, ngoba kwakungekho imishini yokuwasha ngaleso sikhathi. Kubalulekile ukucabanga le nqwaba yezingubo ezingcolile, kubonakala nsuku zonke, futhi kubonakala ukuthi kubaluleke kangakanani ukuqala ukufundisa izingane embizeni ngokushesha ngangokunokwenzeka. Embhodini, izifiso zangempela zadlalwa: izingane ziphikisana, omama baphikelela. Futhi ngaphandle kwezinyembezi ezingxenyeni zombili azikwazanga ukwenza. Ngenhlanhla, lezi zikhathi zidlulile. Konke kwaba lula kakhulu futhi kulula. Kodwa ngeke ugcine ingane emanqoleni ngaso sonke isikhathi. Isikhathi esithile siza uCh.
Iningi labesomama nsuku zonke bayazibuza ukuthi bangafundisa kanjani ingane ukuba icele ibhodlela. Kodwa eqinisweni, akukho lutho oluphuthumayo ekuqeqeshweni kokuqala kwezimpumputhe embizeni. Uma kungekhona mayelana nokuphoqelela nokujeziswa ngenxa yokuthi ingane ayiwenzi umsebenzi wayo lapho kudingeka khona. Ukuhleka okunjalo akunakwenzeka ukudlula ngaphandle kokulandelela kwengqondo yengane. Ukuxosha ingane embizeni kunalokho kuyimemo engekho emthethweni yokusebenzisa le "nto yangaphakathi". Izingane zitholwa ebhodweni ukuze zingangqubuzana namanye amathoyizi futhi zihlukanise kahle. Ngezikhathi ezithile, angayisebenzisa ngisho nangenhloso ehlosiwe. Kodwa omama kufanele bazi ukuthi kuze kube seminyaka ethile, lokhu kungumngane nje, hhayi "ubungane bangempela". Kuze kube yilapho umzimba kanye nokusebenza kwengqondo sekuvuthiwe ngaphambili, ithemba lokuthola impumelelo ehlala njalo akufanelekile. Okhulile ingane, esheshayo, elula futhi engenabuhlungu ukujwayela ibhodlela. Futhi okufanele kakhulu ngalesi sikhathi izingane zezingane zibiza inkathi kusukela ezinyangeni eziyi-18 kuya kwezi-24 zemvuthu. Kungani kunjalo? Kuvele ukuthi kule minyaka yobudala ingane ikwazi ukuvuthwa kokugcina ezindaweni eziphethe ukulawula okuqaphele emsebenzini womzimba wakhe.
Ngakho-ke, kubuzwa, kungani ingane, kuze kube yonyaka, ikwazi ukubona uMama nobaba, ukuhlukanisa imibala, wazi ukuthi "usho kanjani" ikati nenja, futhi ayiboni nhlobo ibhodlela? Kungase kubonakale kithi ukuthi lezi zimpondo noma ngisho nesifiso sokwenza umama nobaba bagule, ukubonisa uhlamvu, kodwa akunjalo. Kuze kube yiminyaka eyodwa nengxenye ingane ayikwazi ukulawula umsebenzi wesisu sakhe. Ngamanye amazwi, akakwazi ukubekezelela, uma efuna ukungena endlini yangasese, akacabangi ngisho nokuthi lokhu kungakwenza futhi kufanele kwenziwe. Kwenzeka nje. Futhi uma abantu abadala beqala ukugxeka lokho okwenziwe "okungalungile futhi", ingane ayiqondi ukuthi yenzani engalungile. Futhi ufunda into eyodwa kuphela: "Ngimbi, ngakho bangihlambalaza." Futhi ngokuqinisekile akayikuxhuma lokhu neqiniso lokuthi wayenamathele ama-panties akhe.
Indlela yokuqonda ukuthi ingane isilungele ukuqeqeshwa?
Yilalela ingane yakho, futhi uzobona lapho ilungele isibalo sempawu. Ngendlela, izingane zezingane zikholelwa ukuthi kukhona ukungafani kobulili kule ndaba. Ngakho-ke, kuphawulwe ukuthi amantombazane avuthwe ekuqaleni, futhi akwazi ukulawula umsebenzi wamathumbu kusukela ezinyangeni ezingu-12-18, kuyilapho abafana le nqubo ingabonwa esikhathini esiyizinyanga ezingu-18 kuya kwezi-30 zokuphila. Isibonakaliso sokuzimisela ukuya embizeni yilezi:
Ukuzivocavoca kwamathumbu emntwaneni kwenzeka kaningi futhi kuhlelo olulinganiselwe.
I-diaper yomntwana ihlala isomile ngemva kokuhamba, ukulala - okungenani amahora amabili kulandelana.
U-Kroha uyaqonda ukuthi kwenzekani kuye lapho enza ibhizinisi lakhe - uyabubula, ahlangane nokuvuthwa nokuhlukunyezwa.
Ingane isivele iyakwazi ukukhuphuka ezindaweni eziphansi, isuse izingubo zayo futhi ikhulume kahle ukuze iveze isifiso sayo sokuya endlini yangasese.
Ingane ibonisa lapho i-diaper imanzi, imcela ukuthi ashintshe.
Iveza isifiso sokusebenzisa ibhodlela, gqoka izingubo zangaphansi, "njengekhulu."
Uma ubona lezi zibonakaliso, zama ukunikela ngesineke ingane ukuthi isebenzise imbiza. Futhi udumo ngenxa yobuciko obonisiwe!
Indlela yokufundisa ingane ukuba ilale?
Ukuhambisa imidlalo yezingane nabantu abadala
Indlela yokukhetha igama lomntanakho
Ukwesaba kwezingane, iminyaka yobudala bezinkathazo
Lokho amantombazane angakufunda kumakhasimende, noma ukuthi i-Scrum iyasiza kanjani ekuphileni kwansuku zonke
Ukuqala kwe-autumn: ukwakheka kanye nobusuku kubonakala ku-Kiehl
Ungathatha kanjani i-ginger ukuze ulahlekelwe isisindo
UmkaSergey Shnurov: izimfihlo zeMatilda elicwengile (izithombe eziningi zezingane zeCord)
Indlela yokukhetha ukwakheka kohlobo lwakho lobuso
Iresiphi yama-cookie ama-almond
U-Alsou watshela iqiniso ngomyeni wakhe-"u-tyrant"
Ukuxoshwa okuncane kwezingane ezincane
Izinyathelo eziyisithupha zokuceba - ngokulondoloza
Uma indoda ifuna ucansi kuphela, uyayithanda?